Shirweynaha ka hortagga argagixisada iyo istaraatijayada dabargoynta oo maantay ka furmay Garowe. – Radio Daljir
Maajo 12, 2015 9:03 b 0
Garawe, May, 11, 2015 – Madaxaweyne ku xigeenka Dawladda Puntland ahna ku simaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 12-5-2015 si rasmi ah hoolka Baarlamaanka Puntland uga furay shirweynaha ka hortagga argagixisada iyo istaraatijayada dabargoynta argagixisa Dawladda Puntland ee Soomaaliya.
\_’\_’ Inagoo aaminsan Ilaah waa in aynu kuligeen u diyaar garowno sidii aynu isaga celin lahayn Burcad diimeedka Al-shabaab oo cadow ah cidnana aan dhaafayn , hooyo dhaafayn , aabe dhaafayn oo xataa aan walaal iyo culimaba dhaafayn \_’\_’ Ayuu yiri Eng. Camey.
\_’\_’ Waxaan umadda Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan u sheegayaan in umaddani isku cadow yihiin , waxaa la sheegayaa inay jiraan dawlado iyagu xiriir iyo hashiis hoose la leh argagixisada , Puntland marnaba kuma talagelin inay xiriir la samayso hadana la samaynmayso \_’\_’ Ayuu hadalka raaciyey Madaxweyne Cabdixakiin Camey.